Modely ho an'ny teny famoronana sary | Famoronana an-tserasera
Modely momba ny teny famoronana sary
Na dia tsy mora aza izany, satria tsy ny olona rehetra no mifantoka amin'ny sehatry ny famolavolana sary, amin'ny manaraka dia hiresaka momba izany isika ireo dingana tokony harahinao hamoronana modely Excel ho an'ny tetibola, izay azo ovaina tanteraka amin'ny fomba iray, amin'ny alàlan'ny fanovana angon-drakitra vitsivitsy fotsiny dia azonao ampiasaina amin'ny karazana hetsika rehetra.
Ary koa, hoy ny maodely manana maodely teti-bola izay aseho ny serivisy lehibe omeny, azonao atao koa ny mampiasa azy io mba hahafantaranao tsara hoe ohatrinona ny sarin'ny mpamorona sary na manitsy ny teti-bola samihafa amin'ny serivisy / vokatrao manokana.
1 Ohatrinona ny frais an'ny Designer Graphic ary amin'ny fomba ahoana no andoavanao vola amin'ny serivisinao?
2 Fepetra fanombanana sy ohatra amin'ny teti-bola
2.1 Toetoetra matihanina
2.2 Tantaran'ny asa sy traikefa
2.3 Fotoana misy sy fotoana fanaterana
2.4 Fomba fampandoavam-bola sy trano fanefana
Ohatrinona ny frais an'ny Designer Graphic ary amin'ny fomba ahoana no andoavanao vola amin'ny serivisinao?
Amin'ny ankapobeny, rehefa somary mankaleo ny fanaovana kajy teti-bola dia matetika noho ny iray amin'ireto antony ireto:
Tsy fantatrao ny filan'ny mpanjifa.
Tsy fahampian'ny traikefa ao anatin'io sehatra io.
Fifaninanana lafo vidy ao anatin'ny tsena.
Serivisy / vokatra azo antoka sy / na vaovao.
Rehefa miresaka ohatrinona ny haben'ny mpamorona sary, mpandrindra tranonkala sy matihanina hafa izay manolo-tena amin'ny fanomezana serivisy misy idiran'ny fahaiza-mamorona sy kalitao kanto na ireo izay tena teknika, manome ny mpanjifa teti-bola henjana amin'ny tranga sasany dia mety ho sarotra.
Fepetra fanombanana sy ohatra amin'ny teti-bola
Na inona na inona asa na asa na asa manokana ataon'ny sahaninao na raha mifantoka amin'ny fampianarana taranja fiofanana ianao, ny vidin'ny karazan'asa rehetra miovaova arakaraka ny miovaova marobe. Na izany aza, tsara kokoa ny mijery ireo izay holazainay aminao eto ambany:
Na dia marina aza fa misy toetra marobe azo atao ny mianatra sy mivoatra rehefa mandeha ny fotoana, ny marina dia misy ihany koa ny fepetra sasany izay ilaina hahafahana mandrefy, ao anatin'ny sehatra iray na hafa. Toy ny tranga any amin'ny sehatry ny Design Graphic, izay mazàna ny sasany amin'ireo toetra ilaina:
Ny famoronana: Ilaina ny fahaizana mifanaraka tanteraka amin'ny fiovana tsy miova amin'ny sehatra.
nahay niara-niory: Takiana ny fahaizana mandika izay tsiro sy filan'ny mpanjifa tsirairay.
javatra iray: Ilaina mba hahafahana mahazo ny filozofia samihafa momba ny asa aman-draharaha.
Ny fananana ireo toetra ireo amin'ny asa rehetra, dia hita fa tena ilaina mba hanome lanja bebe kokoa ny asanao.
Tantaran'ny asa sy traikefa
Ilaina ny mandray an-tsaina ny traikefa anananao amin'ny hetsika ataonao manokana, satria avy aminy afaka manome valiny tsara indrindra ianao, ankoatry ny fahafahanao mampiditra vola lafo kokoa amin'ny maodelinao amin'ny teti-bolan'ny Design Graphic.
Ohatra, ny mpamorona manana traikefa latsaky ny telo taona amin'ity sehatra ity dia mbola horaisina ho toy ny hoe ao anatin'ny "fananganana ny portfolio-nao”, Izay mahatonga ny asa marobe ataon'izy ireo dia manana vidiny ambany, satria nandritra io dingana io dia ny tena manan-danja indrindra dia mahazo referansa tsara.
Fotoana misy sy fotoana fanaterana
Raha noho ny zavatra niainanao dia manana ny mety hanome valiny tsara indrindra ao anatin'ny fotoana fohy kokoa Na raha mirona amin'ny laharam-pahamehana fotsiny ny mpanjifa sasany handao ny asa hafa ianao dia tokony ho fantatrao fa zavatra tokony hoeritreretinao koa izany rehefa manao sy mandefa teti-bola.
Fomba fampandoavam-bola sy trano fanefana
Raha ny mahazatra, rahoviana miasa lavitra na an-tserasera, Ireo mpamorona dia mazàna mangataka 50% farafaharatsiny amin'ny vidiny farany mialoha ary izany dia mifanaraka amin'ny fotoana sy ny fahatokisana anananao amin'ny mpanjifa iray, matetika ireo no toe-bolan'ny teti-bola ary ny fandoavam-bola ho faritana, satria tsy mahafinaritra ny fanenjehana ny mpanjifa aorian'izay hitaky faktiora.
Manantena izahay fa afaka nanampy anao tamin'ity raharaha ity tena tsotra sy be pitsiny miaraka amin'izay
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Modely momba ny teny famoronana sary